Bayern Munich v FC Porto: Milicsiga is-araggii hore iyo dhacdooyinka cusub – Video
HomeChampions LeagueBayern Munich v FC Porto: Milicsiga is-araggii hore iyo dhacdooyinka cusub – Video
Arbacadii toddobaadkii hore ayay labada kooxood ee FC Porto iyo Bayern Munich lugta hore ee wareegga Rubuc-dhamaadka Champions League ku wada ciyaareen wadanka Portugal, halkaas oo ay ka soo baxday natiijo loo qaadan waayey.
Bayern Munich oo la filayey in iyadoo aan dhibaato badan dareemin ay guul ka gaadho Porto Ayaa weji gabax la kulantay kadib markii lagu garaacay 3-1 ay ku badisay Porto. Goolasha dhashay ayaa intooda badan ahaa kuwo khaladkooda loo tirinayey inay sameeyeen difaaca isku-dhexyaacsanaa ee Bayern Munich oo habeenkaas la moodayey in aanay ciyaarba ku soo talo-gelin.
Dhinac Porto waxay habeenkaas ahaayeen ciyaartooyo dhiirran oo ay geesinimo badan ku jirto. Waxay awood u yeesheen in khadka dhexe ay kula loollamaan xiddigaha awoodda badan ee Bayern Munich, waxaanay ku guuleysteen in laba gool uu u dhaliyo Ricardo Quaresma iyo goolka kale oo u raaciyey laacibka Martinez.
Caawa ayey labada kooxood mar kale isaga hor imanayaan ciyaar aad loo sugayo oo ay ku kala bixi doonaan, waxaanay ciyaartu bilaabmi doontaa iyadoo natiijadu ah 3-1 ay ku hoggaaminayso FC Porto.
Yaa ka maqnaan doona labada kooxood
Bayern: kooxda garoonkeeda ka ciyaaraysa ee Bayern Munich waxa dhaawac kaga maqnaan doona ciyaartooyo muhiim ah sida David Alaba,Benatia, Marinez, Arjen Robben iyo Starke. Waxa kale oo aan wali la xaqiijinin in ay ciyaari doonaan iyo in ay maqnaan doonaan laba rukun ee Frank Ribery iyo Sschweinsteiger.
Porto: FC Porto waxa ugu muhiimsan oo ganaax kaga maqnaan doona difaaca baasha midig ee Danilo kaas oo labadii ciyaarood ee u dambeeyey qaatay kaadhadh huruud ah. Sidoo kale, Alex Sandro ayaa isna ganaax ahaan doona. Ma jiraan walaac kale oo haysta tababaraha kooxda oo aan ahayn Tello oo la sheegay in uu muruqa dhaawac ka gaadhay, lagana yaabo in uu maqnaado kulanka caawa.
Daawo ciyaartii hore ee labadan kooxood ee ku dhamaatay 3-1:
Mo Farah Oo Noqday Shaqsigii 2 aad Ee Abid Ku Guuleysta Bilada Dahabka Ah Laba Tartan Orod ‘Mid kasta laba jeer’
Chicago Bulls vs Sacramento Kings Full Game Highlights / Feb 5 / 2017-18 NBA Season
Cabdiriyaad: “Gabiley Anigaa Doortay, Hargeysa Ciyaartooy Badan Ayey Haysataa, Wayna Jiraan Laacibiin Aan Jecelahay”